दशैंको टीकाको शुभसाइत बिहान १०:२ बजे, कता फर्केर लगाउने ? « Naya Page
दशैंको टीकाको शुभसाइत बिहान १०:२ बजे, कता फर्केर लगाउने ?
प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०६:१५
काठमाडौं, २९ असोज । आज (शुक्रबार) बडादशैंको दशौं अर्थात् मुख्य दिन । आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ आज विजयादशमी पर्व मनाइँदैछ ।
आज बिहान १०ः२ बजे टीका लगाउनका लागि शुभ साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा.श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । विजयादशमीका दिन आज दिनभर टीका लगाउने साइत भए पनि दिनभरमध्येमा राम्रो समयको साइत १०ः२ बजेलाई तोकिएको छ । ‘अत्यावश्यक परेकाले देवी विसर्जन गरेपछि टीका लगाउन हुन्छ, १०ः२ बजेको साइत नै कुर्नु पर्दैन’, समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
अधिकारीका अनुसार समितिले दिएको साइतको समय प्रभावशाली भएकाले सक्नेले यही समयमा टीका लगाउने गरी तयारी गर्न नसक्नेका लागि विजयादशमीको दिन बिहानदेखि अखिल बलिपूर्तिका लागि पूजा गरेका सबै सामग्री नसेलाएसम्म टीका लगाउन कुनै समस्या छैन ।